Antonio Valencia oo shaaca ka qaaday sheeko qosol badan oo dhexmartay isaga iyo macalinka Wigan hogaamiya ee Steve Bruce | Laacibiin.net
Home » Horyaalada » Premier League » Antonio Valencia oo shaaca ka qaaday sheeko qosol badan oo dhexmartay isaga iyo macalinka Wigan hogaamiya ee Steve Bruce
Antonio Valencia oo shaaca ka qaaday sheeko qosol badan oo dhexmartay isaga iyo macalinka Wigan hogaamiya ee Steve Bruce	Daafaca kooxda Manchester United Antonio Valencia, ayaa shaaca ka qaaday sheeko xiiso badneyd, oo dhexmartay isaga iyo tababarihiisii hore ee Wigan Steve Bruce.
Xiddiga heer caalamiga ee xulka Ecuador ayaa sheegay in tababaraha Wigan Steve Bruce, uu u sheegay inay xiiseyneyso inay qaadato Man United, waxa uuna xusay inuu si weyn ula yaabay arintaas, ayna ku adkaatay inuu si sahal ah, u rumeysto aruintaas, sanadii 2009-kii.
Antonio Valencia ayaa qiray inuu Steve Bruce , markii uu u sheegay arintaas uu si wey ugu qoslay, isagoona xusay in marnaba uusan aaminin in kooxda Manchester United xiiso ay u qabto.
Valencia, markii uu kusoo biirayay Red Devils, waxa uu kaliya joogay seddex sano Wigan, oo lasoo wareegtay bishii August 2006.
Waxa uu sheegay in markii uu kusoo biirayay United, uu tababarihii hore ee Sir Alex Ferguson, uu ku qanciyay inuu garoonka Old Trafford, ka noqonayo mid muhiim safaka koowaad ee kooxdiisa.
Valencia ayaa ahaa ciyaaryahan ka duulaan taga garabka, xilligii uu ka tirsanaa kooxda Wigan, iyo waqtigii Sir Alex, balse tan iyo markii uu ka dhaqaaqay United, Ferguson, waxaa loo isticmaalayay booska daafaca midig .
inkastoo, uu qiray inuu ku dhibtooday inuu aamino, inay doonayso Red Devils, ayuu sheegay inuu si aad ah uu jeceel ugu qabo kooxda, islamarkaana ay tahay qeyb kamida jirkiisa.
Waxa uu u sheegay website-ka United “Waxaan xusuustaa Steve Bruce oo ii sheegay in United ay i xiiseynayso, laakiin waxayna igu qaadatay in mudo ah inaan rumeyso arintaas, had iyo jeer isaga wuu igu qosolayay, dhib malahan waxay ahayd xiiso oo iga batay kaliya” ayuu ku adkaystay.
Valencia ayaa haatan ku dhow inuu safto kulankiisii 300-aad United, isagoo kula guuleystay labada horyaal oo Premier League-ga ah, waxa uuna sidoo kale FA Cup-ka, kula raaxeystay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ee 2016-17, waxaana uu la qaaday tababarihii la ceyriyay Luis Van Gaal, isagoona hadda taagan Final-ka League Cup-ka, oo ay la dheeli doonan Southapmton.
Valencia ayaana wajahaya kooxdiisii hore ee Wigan, marka ay kooxdiisa United la ciyaareyso wareega Afaraad ee FA Cup-ka, maalinimada birito ah.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/antonio-valencia-oo-shaaca-ka-qaaday-sheeko-qosol-badan-oo-dhexmartay-isaga-iyo-macalinka-wigan-hogaamiya-ee-steve-bruce/">Antonio Valencia oo shaaca ka qaaday sheeko qosol badan oo dhexmartay isaga iyo macalinka Wigan hogaamiya ee Steve Bruce</a>